အမိမြေသို့ကျေးဇူးဆပ်ခြင်း: February 2010
အအေးကို ကျော်ဖြတ်ရန် အပူရှိတယ်…
သဘာဝရဲ့ အနိုင် နဲ့ အရှုံး..သေးငယ်သောမှိုကိုစား ဘက်တီးရီးယားရှိတယ်.ဘက်တီးရီးယားကို ချေမှုန်း..ပင်နီစလင်လို မှိုမျိူးရှိတယ်။ကျားက တောဝက် ကိုလိုက်ရန် သန်မာသောခွန်အားရှိတယ်..တောဝက်က ကျားကိုပက်ရန် ချွန်မြသောအစွယ်ရှိတယ်။လေထန်ကုန်းသစ်ပင် သစ်ခေါက်ထူလာမယ်။ကမ်းနားသစ်ပင်...အမြစ်ကုတ်အားကောင်းတယ်။သဲကန္တာရဆူးရစ်ပင်မှာ ရေသိုလှောင်တဲ့ ရွက်ပြားရှိတယ်.ရွံ့ နွံ့ လတာပြင်က လမုပင် လေရှူမြစ်တွေ ရှိတယ်။အမြဲစိမ်းသစ်တော ပုတ်သင် ဘဘာဝရဲ့အရောင်ပြောင်းခြယ်။ရန်သူမြင်ရင် ရေဘ၀ဲ မှင်ခြယ် ကိုယ်ရောင်ဖျောက်တယ်။ဘယ်လို အကောင်ငယ်ငယ်..သဘာဝကပေး..ကာကွယ်ရေးသတ္တိ ပိုင်ဆိုင်တယ်။ဘာမှ အားမငယ်နဲ့ …သင်၏ အရည်အသွေး..သင်လေးစားပါ။သင်၏ Will Power သို့ မဟုတ် သံဌိဓါန် ယုံကြည်ချက်Survival… သို့ မဟုတ်..သက်ရှင်နိုင်မှူစွမ်းပကား..Adaptations သို့ မဟုတ်.. ခံနိုင်ရည်ပြောင်းလွဲမှု စွမ်းပကားသင်.ယုံကြည်လိုက်ပါ။သင်နဲ့ အတူရှိတယ်။သံကိုပင်.အပူပေး..ပုံစံသွင်းလို့ ရတယ်။ပတ်ဝန်းကျင် သဘာဝသင် မျိူးစေ့ချဖို့ ဟာ သင်၏ တာဝန်သင့် မျိူးဆက်ရှင်သန်ရန် သင်၏ တာဝန်။ရေခူလို သာမညပေမဲ့..သင်..အဆိပ်ဆူးတွေ ဆင်။ဖြူလို အကောင်သေးပေမဲ့..သင် ပက်ဆူးတွေ အသင့်ပြင်ရေမြွေလို အိပ်နေသော်ငြား မြေဟောက်လိုပေါက်ဖို့ ပြင်။သမင်လို အပြစ်မဲ့ပေမဲ့..ဦးချိူသွေး ခတ်ဖို့ ပြင်.မတရားတာရှိ..သဘာဝတောင် ခေါင်းငုံ့ မကြည့်ဖူး.အစာလုရင်…ခွေးတောင် ဟောင်တဲ့အမျိုး.မတရားတာပြု..ကျီးကန်းတောင် ပြန်ဆိတ်တဲ့အမျိုးအချင်းချင်းရန်စ…ကြက်တောင် ခေါင်းဆိတ်မခံတဲ့အမျိုးဒို့ လူသားတွေ ငြိမ်ခံရမလားဟေ့..ဒို့ ဘိုးဘွားပိုင်..ဒို့ အားလုံးဆိုင်တဲ့မြေ…ဒို့ သယံဇာတတွေ စားသုံးရန် အခွင့်အလန်း မရှိပါသလား။ဒို့ ကိုးကွယ်ရာ ယုံကြည်မှု ဒို့ မ ကာကွယ်သင့်ပါသလား။ဒို့ ဘိုးဘွားကောင်းမှု ရှေးဟောင်း အမွေအနှစ်တွေ မထိမ်းသင့်ပါသလားဒို့စာပေ အနူပညာ..စာကြည့်တိုက်တွေ မရှိသင့်တော့ပြီလား.ဒို့ နိူင်ငံ ဂုဏ်ဆောင် ပြည်သူ့ ရင်ပြင် ပြည်သူ့ ပန်းခြံ မရှိသင့်တော့ပြီလား။ဒို့ သားမြေးတွေ ကစားရန် ကစားကွင်းတွေ မရှိသင့်ပါသလား..ဒို့ ပြည်သူတွေ အလင်း..လျှပ်စစ်မီးမလင်းသင့်ပါသလား.ဒို့ မြေက ထွက်သောဆန်စပါး..ဒို့ မစားထိုက်ပါသလား.ဒို့ မျိုးဆက်တွေ အတွက် စာသင်ကျောင်း ဒို့ မတက်ထိုက်ပြီလား.ဒို့ ပြည်သူအတွက် ကျန်းမာရေး ဆေးပေးရုံမရှိသင့်တော့ပြီလားဒို့ပြည်သူုအချင်းပွား မျှတသောတရားဥပဒေမရှိတော့ပြီလား..ရေသန့်လေသန့်အစာသန့်ပတ်ဝန်းကျင်သန့် ..အကျင့်စာရိတ္တသန့် ဒို့ ပတ်ဝန်းကျင် ရေမြေအတွက်..ဒို့ တတွေ ထိမ်းသိမ်းရန် တာဝန်မရှိပြီလား။ဒို့တတွေ၏ အသက်စည်းစိမ်ဥစ္စာ..ကာကွယ်ခွင့်မရှိပြီလား.လူ၏ တန်ဖိုး..လူ၏ လွတ်လပ်ခွင့်..လူ၏ စွမ်းအား လူ၏သမာဓိလူ၏ အဆင့်အတန်း လူ၏ ထီထွင်အား လူ၏ တွေးခေါ်ဥာဏ်အမှောင်ထဲမှာ အလဟသ အချီးနှီးခံမည်လော…ငွေများ ငွေနိူင်..ငွေရှိသူ ပိုင်..ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်း..လက်သင့်ရာစားတော်ခေါ်နိုင်ပါသလား.ရှိသမျှ အမိုးခွါ.. တိုင်ချွတ်ရောင်းပြည်သူအတွက် မကျန်တာ တိုင်းပြည်ဘဏ္ဍာတိုက် ဟောင်းလောင်းပြည်သူဟာ တိရိစ္ဆာန်သာသာ..ကျွန်သာသာလား..ငုံ့ ခံနေတာ..ဒို့ အပြစ်ပါ တကား…ကြောင်ဆိုရင်…လက်သည်းထုတ်ကြဖို့အချိန်တန်ပြီ..မြွေပွေးမှန် အမောက်ထောင်ပြဖို့လိုသည်.ကင်းမြီးကောက် မှန် အမြီးထောင်တုတ်ကြရန်လိုပြီ။လူတိုင်းကိုယ်စီ စွမ်းရည်ရှိသည်။.မတရားမှုမှန် တွန်းလှန်တိုက်ခိုက်ရန် လိုသည်။လူဘ၀ သည် တကြိမ်သာမွေး..တကြိမ်ဘဲသေသည်။ရခဲသောလူ့ ဘ၀ လွတ်လပ်စွာ လူပီသရန်ဖြစ်သည်။လူသတ်လက်နက်သည် ကြောက်ရန်မဟုတ်။လူသား၏ တည်ထွင်မှူတရပ်..သာသင့် ၏ စွမ်းရည်သာလျှင် တန်ဖိုးမဖြတ်အပ်။သင်သည်သာ သင်၏ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်၏။သင်သည်သာ သင့်အနာဂတ်အတွက် ကိုးစားရာဖြစ်၏။သင်သည် ပိုင်သည် သင်၏ အနာဂတ်…လမ်းဆုံမှာ ရပ်နေ..မတွေဝေနဲ့ တော့..အာဏာရှင်နိဂုံး..အဆုံးသတ်ရန်..တဦးချင်းစီ..တာဝန်ယူကြ။ညီညာဖျဖျ..တွန်းလှန်ကြ။သင်ဝိညာဉ်သည်သာ သင်၏သူရဲကောင်း..သင်၏ ရာဇ၀င်ကြောင်းမှာ…မဆုတ်မကွာရှိနေတယ်..ကဲ လာ..ခွပ်လိုက်ကြစို့ သူငယ်ချင်း…မနိုင်မချင်း…အသက်ရင်းစေ..ဒို့ ၏ မြေအတွက်….ဒို့ သားမြေးအတွက်..ကျွန်ုပ်တို့ ၏ လွတ်မြောက်ရေးအတွက်…" ကျွန်တော်လှန်ရေးက စပါတာကပ် ကိုမွေးဖွားသလိုစပါတာကပ်ကြောင့်လည်း ကျွန်တော်လှန်ရေး မွေးဖွားတယ် "" သင်၏ သဘာဝပေးသတ္တိ..တော်လှန်ရေးအတွက် အသင့်ရှိစေ..လက်မတို့ ပါရစေနှင့်..ရန်သူ အပေါ် မီးလို ရေလိုကျင့်.."အမှန်ဟာ အဆုံးမှာ အနိုင်ရတာထုံးစံ..သင့်တာဝန်က ရွေ့ အောင်သာ ဆက်တွန်းကြပါရန်။မသဒ္ဓါ ( ၂။၂၃။၂၀၁၀)တပြည်လုံး မိစ္ဆာဒိဌိတွေ ခိုးယူတာကုန်ပါပြီ...ရန်သူကိုတွန်းလှန်ရန်.မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းတွင် တာဝန်ရှိသည်။ ဤသည်မှာ သမိုင်းပေးတာဝန် ဖြစ်၏။မမေ့ပါနှင့်..မြန်မာသည် သင့်ဘိုးဘွားပိုင်..သင့် ရပိုင်ခွင့် သင် ပိုင်ဆိုင်ရန်..သတ္တိတံခွန်ထူ..တအိမ်တယောက် အားတင်းထွက်ကြပါတော့ရန်....စေတနာဖြင့် အကျိုးမျှော်...နှိုးဆော်ပါသည်.
မောင်တားဆီး၏ မြန်မာပြည်အတွေ့အကြုံ (ကွန်ဒွန်ကလေး၏…ရင်ဖွင့်သံ)
ကျနော်နာမည် မောင်တားဆီး ပါကျနော် ဘယ်ကစ..အခုထိ ညင်းနေကြတုန်းဘဲ..ကျနော့၏..ဘိုးဘွားအစ..တိရိစ္တာန်၏ အူနံရံပါး..ဆီးအိမ်နံရံများ.သားရေစ.ပိုးစ..ချည်စ.ဆီစိမ်စက္ကူက..ပြောကြတယ်..လက်တင်လို ‘CONDUS’ ဆိုတာထည့်စရာခွက် အမည်ရတာပေါ့..အီဂျစ် နံရံဆေးပန်းချီ..ဂျပန်ရှေးသမိုင်းတော်တော် ရှေးကျတဲ့ ကျနော့ အမျိုးရိုးပါကြက်ပေါင်းစေးနဲ့ အဘိုးကတော့1844 က စတယ်..နောက်.တဖြေးဖြေး..ပိုပို အမျိုးမြင့်လာ..ကျုပ်ခေတ်ကျ ကြည့်Made by latex or polyurethane..အရောင်စုံ ဆိုက်ဆုံ ပုံစံစုံပေါ့..အနံစုံ အရသာစုံ..ပူရှိန်းရှိန်း ချိုမြမြ..ပန်းရောင်..အပြာရောင် လှမှ လှ…အထူအပါး..အနူအရွပါးပါးလွှာလွှာ..ကောင်းမှကောင်းဗျာ..ကျနော်ဆို ရှိတယ်တောင်မထင်ရဖူး..စားသုံးသူတွေ သဘောကျ..ထိတယ်..သိတယ်..လူကြိုက်တယ်ဗျိူ့ ဒါပေမဲ့ မြန်မာပြည်မှာတော့ ကျနော် အလုပ်မဖြစ်ဖူး..ကျနော်တို့ အလုပ်ကတော့အကာအကွယ်ပေါ့..ဆစ်ပလစ် ဂနိူ..အသည်းယောင် အသားဝါ A to ZHIV နဲ့virus အမျိုးမျိုး..ကလေးခြား..မျိုးဆက်မပွါးဖို့ ရာ…ကျနော်..ကုသိုလ်လုပ်တဲ့ သူပါဗျာဒီလိုနဲ့ကျနောတို့အမျိူးတွေ ကမ္ဘာလှည့်..အာရှ အာဖရိက..အမေရိက သြစတေးသျှ..ကမ္ဘာ အရှေ့ နောက်တောင်မြောက်အာကာသတောင် မချန်..ခရီးသွားဖူးတယ်…ကျနော် လာတဲ့နေရာတော့မမှတ်မိတော့ဖူးကျနော့ကို ဆီလိမ်းပြီးချုပ်..အိပ်ထဲတည့်..ဗူးထဲပိတ်..UN..အထောက်အပံ့ နဲ့ခရီးသွားတာ…ရောက်နေတာဗျာ..မြန်မာပြည်တဲ့…ကျနော်တို့ ဦးရေ..များများစားစားတော့ မရှိဖူး..ရှူးတိုးတိုး..ဒီနိူင်ငံက ယောက်ျားတွေ ရှက်တတ်တယ်တဲ့ဗျ…မိရိုးဖလာဘဲ..အရိုးပေါ်အရွက်မဖုံးတဲ့ ရွှေနိုင်ငံတဲ့နိူင်ငံခြားဖြစ် မကြိုက်.. မလို..condom မလိုပါ တဲ့..အသိနုံနဲ့ရှက်ရမဲ့အရာ မရှက်...မရှက်ရမဲ့အရာ ရှက်တတ်တဲ့ လူတွေ ရဲ့နိုင်ငံပေါ့အော်..ဒေါ်ဖြူဖြူသင်း လား..သိတာပေါ့ဗျာ..ပြည်သူအတွက် ကောင်းတာလုပ်လို့ အစိုးရမကြိုက်တဲ့သူပေါ့..ကျနော့ အမျိုးတွေ ခပ်များများ..သူ့ ဆီရောက်ဖူးပါတယ်..အော်..ပြောရဦးမယ် ကျနော့ အကြောင်း..ဇာတ်ကြောင်းကတော့ နည်းနည်းရှည်တယ်.ကျနော့ ပိုင်ရှင်က ကောင်မလေး ငယ်ငယ်ပေါ့..ဆယ်ကျော်သက်..ခပ်ရိုးရိုး..အေးအေး.အမေ မမာသယ်…အဖေသေဆုံး..လင်မရှိ..ရည်းစားမရှိ.အလုပ်တော့ ကြိုးစားတယ်..မနားဖူး..အလုပ်ပေါင်းစုံလုပ်တယ်..အစက ကျောင်းသူ..အဖေသေ..စီးပွါးကပျက်ကျောင်းဆက် မတက်နိုင်..ကောင်းရောင်းကောင်းဝယ်..ဈေးထဲ ဟင်းရွက်ရောင်းတာ..ဖမ်းသွားတဲ့စည်ပင်..ဈေးခေါင်း..ပန်းဦးအချိုးကောင်းလိုက်တာနဲ့ ..ပေါက်တဲ့နဖူး မထူး..သူ ဒီဘ၀ရောက်လာတာဘဲကုန်တိုက်.အရောင်းစာရေးမ..စားသောက်ဆိုင် ကာရာအိုကေ..အဆိုတော်..မော်ဒယ်လိုလို..နာမည်တော့ သိပ်မကျော်..အလှပြင်ဆိုင်..အနှိပ်သည်မ..အရောင်ပြောင်း စတိုင်ပြောင်းခပ်ဟော့ဟော့ ပျက်သွားတယ်.ဒီလို ဒီလိုနဲ့စ လိုက်တာ..တနေ့ တနေ့လာတဲ့အရွယ်စုံဇောချွေးစို.. အဆီပြောင်နဲ့ လူကြီး..သွားတုကြီးတွေ ခပ်ဖြီးဖြီး..ဗိုက်ပူ တုံတုံအိအိ .ခေါင်းမွေးအမဲမရှိ..ငယ်မူသွေး..ငယ်တာလေးတွေ ဘဲအရသာ.လိင်ကို ငွေနဲ့ဖလှယ် စားသုံး..မြိန်ရှာ..ရေကြည်သောက်ကြတာ..တယောက်ပြီး တယောက်..ကောင်မလေး ခမျာ..ဘူးသီးနူ အမွေးမသပ်ခင်..အသက်ကလေးတောင် ၂၀ နံပါတ်မတတ်ခင်..HIV ကိုယ်ထဲ ၀င်ခဲ့တယ်.ဆေးခန်းက ဆရာမ..သူကို စကားစတယ်..“သမီးရေ…စားဝတ်နေရေးကတော့ ဟုတ်ပါတယ်..ဒါပေမဲ့ သမီးရဲ့ ပိုးတွေ..ထပ်မဖြန့် နဲ့ ..စားသောက်သူ ပိုက်ဆံပေးတိုင်း..ဘလိုင်းကြီးမဆက်ဆံပါနဲ့ …သမီးရဲ့ ကူးစက်နိုင်တဲ့အဆင့်..မြန်ဆန်နေတယ်..လူလူချင်း စာနာ..သမီးရေ..ဒါလေးသုံး ကူညီပါ”ဒီလိုနဲ့ကောင်မလေးရဲ့ ပိုက်ဆံအိပ်ကြား..ကျနော် ပါသွားပါလေရော..အံမလေးဗျာ..စာတွေထဲ ကမ္ဘာ့ အဆင်းရဲဆုံးမြန်မာပြည်..တဲ့..ဟုတ်ပါဖူးဗျာ..အလကားရ လာဘ်လာဘတွေနဲ့ရဲ..အစိုးရ ပေးစာကမ်းစာနဲ့ ကြံဖွတ်ငနဲ ..အစိမ်းရောင် ရှေ့တလက်မနောက်ပြောင်နဲ့စစ်သားငနဲ…မညောင်းဘဲ အနှိပ်ခံရဲကြတယ်ဗျ..ကောင်မလေးက မနှိပ်ရ..သူတို့ က ပြန်နှိပ်ပြတယ်..တနေ့ တနေ့အယောက် လေးငါးဆယ်…ဒီကြားထဲ နယ်ထိမ်းတွေ က အလကား သမ သေးတယ်…“အကိုရေ..ကျမ နဲ့ဆက်ဆံရင်..ဒါလေးသုံးပါ.လား”ကျနော့ကိုပြ ကောင်မလေးက စကားစပေမဲ့…“ ဟာကွာ..ဒါ..ဘာလုပ်ဖို့ တုန်း..အလကားခိုးလိုးခုလု..ဇိမ်ပျက်တယ်..ကဲလာ..စကားမရှည်နဲ့ ”..ဒီ စစ်ဗိုလ်တော့ အကျိုးနည်း..ဒီလိုနဲ့ဘဲ...AIDS ကိုက်သွားတယ်..ဒီလိုနဲ့ ..အလကား ရတဲ့ငွေနဲ့ ..လိင် အစားသောက်ကြမ်းတဲ့ ရဲ..ရပ်ကွက်ထဲက..ထောင်ထောင်..ဟိုယောင်ယောင်ငနဲ.လာဘ်စားကောင်းတဲ့ အစိုးရရုံးက အဖိုးကြီး ဗိုက်ပြဲ..ကလေးစစ်သား..မလိမ်မိုးမလိမ်မာ..မောင်မွဲတပည့်ပိုက်ဆံပေးလို့အလကားရ လာဖြဲတဲ့ စစ်ဗိုလ် ငဖဲ..တူသောအကျိုး..ကျနော့ အကူမယူချင်တဲ့ အမျိုးကောင်မလေး ရဲ့ virus တွေရက်ရက်ရောရော..အလှုကြီးပေးလိုက်တာ..ကျနော်သာ သူ့ ပိုက်ဆံအိပ်ထဲ ရက် ၅၀၀ ..တခါမှ သုံးခွင့်မရလိုက်ပါ…ခုတလော ကောင်မလေးနေမကောင်းဖူး..အသားအရေခြောက်..ယားနာပေါက်တော့..လာတဲ့ ဖောက်သည်တွေ ပျောက်..ငွေကြေးလည်း ခြောက်တယ်..ကြယ်လမြင်..တဲစုတ်..မထနိုင် သူလဲနေတယ်..ဘယ်သူမှအဖက်မလုပ်…ဖာ လုပ်တာ..သေတာကောင်းတယ်..ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ အပယ်…လေသံယဲ့ယဲ့..ကျနော့ကို သူက စကားစ…" ငါ့ မှာဒီရောဂါ..ရှိနေတာ..ဖောက်သည်မပျက်ရဲလို့မပြောပေမဲ့…မင်းကို သုံးပါ အကြိမ်တရာ ငါပြောရဲ့…မသုံးကြတော့..တယောက်ကတစ်ရာ..သူတို့အပြစ်မဲ့မိန်းမတွေ ကျွန်ဝယ်ရာအဆစ်ပါ..မနေ့ ညက..လာနေကျ..အကိုကြီးဆုံးသွားပြီ…သူ့ မိသားစု တစုလုံး AIDS ဖြစ်နေပြီ…ငါလည်း မကြာ..သေရတော့ မှာပါ…ငါတို့ နိုင်ငံမှာ..စီးပွါးရေးမတက်..ပညာမရှိ..ဦးနှောက်ပျက်..ဘာမှမတိုးတက်..တိုင်းပြည်ပျက်တယ်..မကြာခင်..တနိုင်ငံလုံး ဖာ..AIDS ရောဂါသည်။မင်း က တာဝန်ကြေပါတယ်..ဒီရောဂါမဖြစ်အောင် မင်းကတားဆီးပေမဲ့…အလကားရတဲ့ ငွေကြေး..သောင်းကြမ်းနေတဲ့ လူယုတ်မာများရဲ့သွေးသွေးသားကို ရောင်းမှစားရမဲ့အစာ..ကျား မသနားတာ..နွားတော့ မချမ်းသာဖူး..ကျမ ဖြစ်ချင်တာ..သူနာပြုဆရာမ..ဖြစ်ခဲ့တာ..ကြေးစားလိင်အလုပ်သမ..အခုတော့ ရေတိမ်မှာနစ်…ကျမ..ဘ၀ညစ်..”ဒီလိုနဲ့ သူမသေတော့…ပိုက်ဆံမယူ..ကျော်သူဘဲ..ကုသိုလ်ယူတယ်..အလောင်းမြေကျ ကံဆိုးသူ ပြည်တန်ဆာမသူမ ညီမလေးက သူမ နေရာဆက်ယူရတယ်..ကျနော့ကို အမွေရ..သူမ လိုဘဲ နေရာတကာသယ်…အခုထိ..ကျနော် ဘာမှမလုပ်ရသေးဖူး..ပိုက်ဆံအိပ်ဒေါင့်ကြားထဲ ပိုင်ရှင်နှစ်ဆက်..ရက်ပေါင်းသာကြာ..AIDS ပွါးလာတာ..ယနေ့ ခေတ်မြန်မာ…ဘုရား..ဘုရား..မကြာခင်..ကျနော် နောက်ပိုင်ရှင်လက်များပြောင်းတော့မလား..တွေးဆဲ မျက်ရည်ကျ..Condom ကျနော့ဘ၀…မသဒ္ဓါ ( ၂။၁၇။၂၀၁၀)အရှက်မရှိ၍ရေးခြင်းမဟုတ်..သိစေခြင်း၍ ရေးခြင်းပါ...နားနဲ့မနာ..ဖ၀ါးနဲ့နာပါ....ဒီလိုနဲ့ ပန်းကောင်းတွေ ကြွေတာများခဲ့ပြီပေါ့အမှန်ကို မြင်ပါ မရှက်ကြပါနဲ့ တော့ အပြည့်အစုံသို့ 
တယောက်ထည်း..အပြင်ထွက်မလည်ပါနဲ့ ..လူလေးရယ်..သားကို မွေးထဲနေ့ ကထဲက အမေ..တနေ့ မှစိတ်မချမ်းသာဖူး..တနေ့ တနေ့ ..အစာစားကြီးလာ..သားလေး လှလာလေလေ.အမေ့သောက ပွေလေလေဘဲ…ငါ့ သားက မေးဖူးတယ်.."အမေရယ်..ကျနော် အမေအမေနဲ့ မတူ..တတောလုံးက ဆင်တွေနဲ့ မတူ..ဘာကြောင့်အရေပြားတွေ ဖြူနေရတာလည်း…အဲဒါ ကျနော် ဆင်ဖြူလား..ဆင်နူလား..မလှပါဘူး အမေရာ..သူများတွေ နဲ့မူကွဲကျနော်ဖြစ်ချင်တာ ဆင်မဲ..ဆင်မ မဲလေးတွေ ဘဲကြိုက်တယ်.."ဒီအဖြေ ပြောပြမယ်သား.မျိုးရိုးဗီဇ သွေဖီကွဲ..အကောင် သ်ိန်းကျော် တစ်ကောင်ပေါ်တယ်..ငုတ်သျှိုး ဗီဇ ပေါ်ပေါက်..ကိုယ်ခနွာအရောင်ပျောက်တယ်..ဒါ Albino လိုခေါ်တယ်..ဘာမှ မထူးခြားဖူး..ဆင်ဖြူနဲ့ဆင်မဲ..အလင်းရောင်ဒဏ်မခံနိုင်..သားက တောင် ပိုနုတယ်..သားကိုမွေးကတည်းက..သူများနဲ့ မတူတဲ့အရောင်..ဆွတ်ဆွတ်ဖြူတဲ့ အမွှေးမျက်လုံးထဲမှာ ရောင်ခြယ်ကင်းမှတော့အဆင်းမဲ့ ပန်းရောင်မျက်လုံး.ပေါ့အမှန်အတိုင်း.ပြောရမယ်ဆို..( လူစင်မမီ..အဲလေ..) ဆင်စင်မမှီတဲ့ ဆင်..ရောဂါသည်..ဆင်မမာ ဘဲသား..သားအဘီ အဘိုး..မျိုးရိုးမှာတစ်ကောင်ရှိဖူးတယ်..လူတို့ ရဲ့ စကားပုံလို "ဆင်ဖြူမျက်နှာ ဆင်မည်းမကြည့်ဝံ့ တာမဟုတ်ဖူး"ဆင် မမာလေးမို့ဝိုင်းသနားကြ..င့ါ့သားကို ဘေးရန်ကင်းအောင်..၀ိုင်းရံကာပေးတာ ဒို့ ဆင်မဲတစ်ထောင်မြန်မာ ရှင်ဘုရင်တွေ အယူသီး.ရူးမိုက်နည်း တစ်မျိူးပေါ့..အရောင်မရှိလို့ဆင်တန်းမ၀င်တဲ့ဆင်..တော်ဝင်သတဲ့ ဘုန်းကြီးသတဲ့..ရခိုင်ဆင်ဖြူတော် ဖမ်းပါ ဆီးပါ တဲ့..သား ကိုမြင်ရင်..မိုက်မဲတဲ့ လူတွေလိုချင်ကြမယ်။မျက်လုံးသည် ပုလဲနှစ်..ခွါ နှင့် အမွေးဆွတ်ဆွတ်ဖြူဌက်ပျောကုန်းသဏ္ဍာန် ဆင်ကျောကုန်း..အစွယ်စုံ..ဆင်စွယ် လုံး..တံခါးလက်ဝါးနှယ် အမြှီး.နားရွက် သဏ္ဍာန်ကြီး.အသွားအလာယဉ်ကျေး..ဆင်ဖြူတို့ ၏ကြင်အန်.. (၈)ပါး..(အရောင်ပျောက်ဆင်၏..အဂါင်္ (၈)ပါး)ပြည်စုံရာ..ငါ့သား...ဆင်သတင်း လူနားဆောင်..ဆင်ကြော့ကြမယ် တစ်တောင်ပြီးတစ်တောင်..ရန်က တော့များတယ်..သားရယ်ဆင်ဖြူတော်မှီ အမေတို့ ကြံမစုပ်ချင်ဘူး..ဒီ ဘုရင်ပေမမီ..သားကို အဖမ်းမခံရစေချင်ဖူး..ကြံဖွတ်တွေ ကြား သားကို မခစားရစေချင်ဖူး..နေပြည်တော်ကျပ်ပြေးထက်စာ..ဘင်္ဂလားသာ ပြေးပါသားရယ်...လူမမြင်အောင် ကိူုယ်ကိုရွှံ့ အပြည့်လူး…ဟိုဘက်ကမ်းသာ..အပြေးကူးပါ..အခြေအနေသာ အမေပြန်ခေါ်လိုက်ပါ့မယ်…မပြေးချင်သော်လည်း ဆင်ဖြူကလေး..ကျနော်လည်း..စစ်ပြေးဒုက္ခသည်..ဒီလို မင်းယုတ်လက်ထက် ဆင်ဖြူလာဖြစ်ရ..အမေ ရယ်..ကျနော်ပြေးရတော့မယ်..ကန်တော့ခဲ့တယ် အမေ..နောင်ဘ၀အဆက်ဆက်..ဆင်မဲဘဲဖြစ်ပါရစေ။မသဒ္ဓါ (၂။၁၇။၂၀၁၀)မြန်မာပြည်..နအဖစစ်ဘေးပြေးသူထဲ သားရိုင်းတိရိစ္ဆာန်များလည်း ပါပါသည်။အမေကွဲသား..ဆင်ဖြူလေးအတွက်...ကြင်နာစွာဖြင့်..
အာဇာနည် နှင့်မအာဇာနည်..
သူ…ဘယ်သူမှမတူသော ဇမ္ဗူတလူ..မယှဉ်ဝံ့သော သူလိုလူပေါ့..။အာဇာနည်ကဆင်းသက်.. ဗိုလ်မင်းရောင်သွေးစက်လည်းဖြစ်တယ်။နတ်မောက်မှာမွေးဖွား အညာသားလေးလည်းဖြစ်တယ်။ပျော်ရွှင်လှုပ်ရှား..ငယ်ဘ၀ကလေးရှိတယ်။ဖြူစင်ရိုင်းစိုင်း..လှိုင်းလို အရိုင်းကလေးလည်းဖြစ်တယ်။မဟုတ်မမှန် တိုက်ရန်..ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်အမှန်လည်း ဖြစ်တယ်။တက္ကသိုလ်ထုတ်ပယ်ခံ အိုးဝေမဂ္ဂဇင်းအယ်ဒီတာလည်း ဖြစ်တယ်။ကျောင်းသားသပိတ်ရဲ့ မူလ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂဥက္ကဌလည်းဖြစ်တယ်။ဒို့ဗမာအစည်းအရုံး၏ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှုး သခင်အောင်ဆန်း လည်းဖြစ်တယ်သူရိယမဂ္ဂဇင်း၏ အညာသားလေး ကလောင်နာမည်နှင့် စာရေးသူလည်းဖြစ်တယ်။ဗမာ့ထွက်ရပ်ဂိုဏ်းကြီးထူထောင် ဆင်းရဲသားပါတီ၏ မဟာမိတ်အဖွဲ့အတွင်းရေးမှုး ဖြစ်တယ်။.ဗမာပြည် ကွန်မြူနစ်ပါတီထူထောင် ပထမဆုံး အထွေထွေအတွင်းရေးမှုး ဖြစ်ခဲ့တယ်။ဗြိတိသျှတော်လှန်ပုန်ကန်..ငါးကျပ်နဲ့ ဝရမ်းပြေးသမားလည်းဖြစ်တယ်။ဂျပန်စစ်သင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့ ရဲဘော်သုံးကျိပ်အဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်တယ်။(ဘီအိုင်အေ) (ဘီဒီအေ) ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်မှုးကြီးအောင်ဆန်း လည်းဖြစ်တယ်။ဂျပန်ဧကရာဇ်၏ှ တက်နေဝန်းဂုဏ်ထူးဆောင် ဘွဲ့ရ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဖြစ်တယ်။ရွှေရည်စိမ်လွတ်လပ်ရေး လက်ကိုင်ရ စစ်ဝန်ကြီးဘ၀လည်း ဖြစ်ခဲ့တယ်။ဘီအင်အေတပ်၏ ဦးဆောင်၍ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ပြောက်ကျားလည်းဖြစ်တယ်။‘ဖက်ဆစ်ဆန့်ကျင်ရေး ပြည်သူ့လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ကြီး’ (ဖဆပလ) ၏ ဥက္ကဌလည်းဖြစ်တယ်။တိုင်းရင်းသား သွေးစည်းညီညွတ်ရေး ပင်လုံစာချုပ်ကို လက်မှတ်ထိုးသူဖြစ်တယ်။လွတ်လပ်ရေးအတွက် အကြမ်းဖက်သည့်နည်း၊ မဖက်သည့်နည်း သို့မဟုတ်နှစ်နည်းစလုံးကို အသုံးပြုရန် တွန့်ဆုတ်နေမည်မဟုတ် ရဲရဲဝံ့ဝံ့ စိန်ခေါ်ရဲသူဖြစ်တယ်။.နိဂုံးမှာ အကောင်းဆုံးတွေ မျှော်လင့်၊ အဆိုးဆုံးကိုလည်း ရင်ဆိုင်ရန်အသင့်ပြင်ဆင်ထားသူဖြစ်တယ်။ပြည်နယ် ပြည်မ တောင်တန်းဒေသ တစ်ပါတည်းလွတ်လပ်ရေးပေးရန်ကိစ္စ အောင်ဆန်း အက်တလီစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့သူဖြစ်တယ်။မသမာသူတွေ လက်ချက် ဇူလိုင် ၁၉ ရက် လုပ်ကြံသတ်ဖြတ် ခံရသူလည်းဖြစ်တယ်။တပြည်လုံး တသသ ယနေ့ ထက်တိုင်ချစ်ခင်သူလည်းဖြစ်တယ်။သူဟာစိန်ရွှေ စိတ်မ၀င်စား..ပဲပြုတ်နံပြားစားလို ရိုးသားသူလည်းဖြစ်တယ်။အခွင့်ထူးမစား ငါးမူးတန်းကဘဲ ရုပ်ရှင်ကြည့်ရဲသူဖြစ်တယ်။ကြည်ညိုလွန်း၍ လာလှူသော ရွှေငွေကို ညင်းရဲသူုလည်း ဖြစ်တယ်။မိန်းမကောင်း၏ ခင်ပွန်း..သမီးကောင်းတစ်ဦး၏ ဖခင်ဖြစ်တယ်။(သား ၂ယောက်စလုံး သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။တဦးကငယ်စဉ် ရေနစ်သေဆုံးတဦးက သက်ကျားအိုအရွယ် မိန်းမ ထမီကြားထဲတွင်လေမွန်း၍)အင်းလေးကန် လှေစီးစဉ် ‘လှေကလေးကို လှော်မည် သီချင်းညည်းတွားခဲ့သူလည်းဖြစ်တယ်။နိုင်ငံကပေးသော အိမ်စုတ်တလုံးကြောင့် သားဆိုးသစ္စာဖောက်တာ ခံရသူဖြစ်တယ်။အရံမများသော ဖိနပ် အထည်နည်းပါးသောပိုင်ရှင်လည်းဖြစ်တယ်။ပိန်ပိန်ပါးပါး အတ္တမများ.လောဘမပွါး မောဟ မများသူဖြစ်တယ်။သူနေခဲ့တာ လူပြည်ထဲမှာ အနှစ် ၃၂အကယ်၍ အသက်ရှင် ယခု အသက် ၉၅ နှစ်..သူပေးခဲ့တဲ့ လွတ်လပ်ရေးကို..သူတည်ထောင်တဲ့စစ်တပ်..မုဒိမ်းကျင့်နေတာ မျက်ရည်များနဲ့ကြည့်မလား..အရိုးအပြိုင်းပြိုင်း လက်ချောင်းများနဲ့ကင်ဒိုဒါး ကိုင်..ဟယ် ငါမအိုသေးများ ဆိုမလား..သူသည်..တိုတောင်းသောသူသက်တမ်းမှာ များပြားစွာတင်နိူုင်ခဲ့တာ သူ၏ မှတ်ကျောက်ရိုးသားဖြောင့်မတ်တည်ကြည်မှု၊ ရဲရင့်မှု၊ ယုံကြည်သည့်အတိုင်း ပြောဆိုလုပ်ဆောင်မှု၊ကိုယ်ကျင့်သီလ ကောင်းမွန်မှု၊ ရပ်တည်ချက် ခိုင်မာမှု၊ဆုံးဖြတ်ချရာတွင် ပြတ်သားမှု၊ မှန်ကန်သည့် ဦးဆောင်မှုကို ပေးနိုင်မှု၊ကိုယ်ယုံကြည်ရာကို မကြောက်မရွံ့ နောက်မတွန့်ဘဲ တစိုက်မတ်မတ် လုပ်ဆောင်တတ်မှု၊တိုင်းပြည်နှင့် လူမျိုးအပေါ် စိတ်စေတနာ ကြီးမားမှု၊ကိုယ်ကျိုးစွန့် အနစ်နာခံလိုစိတ် အပြည့်ရှိမှု၊နိုင်ငံရေးကို နှံ့နှံ့စပ်စပ် လေ့လာပြီး လက်တွေ့ကျကျ အဖြေရှာနိုင်မှု၊အနာဂတ်ကို ကြိုမြင်တတ်ပြီး အရှည်သဖြင့် တွေးခေါ်လမ်းပြပေးနိုင်မှု …စသည့် အရည်အချင်းပေါင်း မြောက်မြားစွာနှင့် လူဘ၀ကို ဖြတ်သန်းသွားခဲ့..ပြည်သူ ၏မျက်ရှုမြန်မာကချစ်သော ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း...အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီး..ဦးအောင်ဆန်းသေသော်လည်း ယခုထိရှင်တာ သူု့ စိတ်ဝိညာဉ်မသိ၍...မေးပါရစေ..ယနေ့ ခေတ် နအဖ ခေါင်းဆောင်များ..သင်တိုင်းပြည်ကောင်းရန် ဘာလုပ်ပြီးပါပြီလည်း။ပြည်သူများ စားဝတ်ဖူလုံရေး..သင် ဆောင်ရွက်ပေးပါ၏လောမျိုးဆက်သစ်ကလေး..ပညာပေးပါ၏လော..မသဒ္ဓါ ကြိုးကုပ် တပင်တပန်း..ဘုန်းတော်ဘွဲ့ များ ရေးစမ်းပေးချင်ပါရဲ့..ဘယ်မလဲဟဲ့ ကောင်းသတင်း..ရှိနေတာ ပုပ်ဟောင် အဖျင်း..သနားတောင် သနားမိတယ်..အိုကြီးအိုမ အများအဆဲခံနေရပါသောသူများ..နအဖရဲ့ စစ်ခွေးအိုများ..မွှမ်းချင်တဲ့သူ တောင်ချာချာမူး..ကောင်းကွက် တကွက်တောင် ရှာမရဖူး..ဗိုလ်ချုပ်ရာထူးအနောက် မှူးကြီး တတ်ရုံ..ရာထူးပိုမြင့်မားသည်မဟုတ်ငွေစက္ကူစာသားပေါ် သူမျက်နှာဖျောက်ရုံ ပြည်သူမေ့မည်မဟုတ်.ဘယ်သူပေးမှန်းမသိတဲ့ ကြေးပြား..ရင်ဘတ်တတ်ထားရုံ သင်သတ္တိရှိသည်မဟုတ်စိန်ဆင် ရွှေဆင်မှ ဇနီးမယား သမီးသား လူရာဝင်သည်မဟုတ်ပြည်သူကို နားပိတ် ဘယ်ရေဒီယိုညာနေသည် ပြော၍ ယုံမည်မဟုတ်။အချင်းချင်းမျှစား.သဲနဲ့ ဆောက်သောတံတားကို ဖွင့်ပြ..အထင်ကြီးကြမည်မဟုတ်။သမိုင်းသည် သမိုင်း..ရိုးသားဖြူစင်..အမှန်ကို ရေးသည်။အမဲသည် အမဲ အဖြူသည် အဖြူ..အရောင်ပြတ်သားသည်။၀မရှိက ၀ိမဖြစ်..အများချစ်ကြည်ညို။ သင်..မနာလိုတဲ့သောက်ကျင့်..ကိုယ်မျက်ချေးကိ်ု..ကိုယ်ကြည့်သင့်သည်။လူသားတန်းဝင်ချင်….သင့်မျက်ချေးပြောင်အောင် ဆေးလော့သင့်သွေးစွန်းလက် ပြောင်အောင်ပေးဆပ်လော့ပြည်သူက ဘဲဆုံးဖြတ်ပွဲပြည်သူပေးသော အာဇာနည်..ဘယ်သူ ရထိုက် မရထိုက်သည်။မသဒ္ဓါ (၂။၁၄။၂၀၁၀)နိုင်ငံတော်၏ ဖခင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအတွက်..မငိုနဲ့ အဖေ..မျိူးဆက်သစ်တွေ..အသက်ရှင်ဆဲ..လွတ်လပ်ရေးလုပွဲ ဆက်နွှဲသွားကြမယ်.
အချစ်များစွာဖြင့် အနိုင်ပိုင်း သတ်ဖြတ်ခဲ့ခြင်း။
ဒီနေ့ သည်. “ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄”
ချစ်သူတွေ ပျော်ရွှင်ဖွယ်နေ့ ..
နူးညံ့သော အချစ်၏ ကဗျာဆရာ
အချစ်များနဲ့လွမ်းနေဆဲ..
အချစ်တွေခံစား.ရင်ခုန်တတ်သူပေါ့..အချစ်ဆိုသောအရာ..ဖော်ကြူးတတ်သူပေါ့..ပူနွေးနီရဲသော သွေးများနဲ့ နှလုံးသားရှိတယ်..နူနယ်တဲ့ အနုပညာလက်ချောင်း..ထက်မြိတဲ့ ဒါးသွားကလောင်တစ်ချောင်းရှိတယ်။စာနာမှု များပြားနဲ့ ..ဂရုဏာတရားလည်းရှိတယ်။ပျိုမြစ်ရက်များ..စတေးထားတဲ့ ရက်များရှိတယ်။.မာကျောသတ္တိတရား..အများအတွက်စွန့် ရဲတဲ့ ဘ၀တစ်ခုရှိတယ်။ချစ်သူများအတွက်..အမှတ်တရ..အချစ်နေ့ လေးတနေ့ ပေါ့..ကဗျာတိုကလေးတပုဒ် ကလေးပါဘဲမိမိ ကိုယ်ထက်မိမိ ချစ်သူထက်…မိမိ မိသားစုထက်…မိမိ အဆုံးမဲ့ မြတ်နိုးတဲ့ တိုင်းပြည်အတွက်မိမိ အပြုံးမဲ့နာကြင်နေတဲ့ အမျိုးသားများအတွက်အကြင်နာမဲ့ လူသားမဲ့ နှလုံးသားနဲ့ အာဏာရှင်သို့ စိမ်ခေါ်ခဲ့တယ်..မေတ္တာများနဲ့ ကဗျာသီခဲ့တယ်.
ပြည်သူကို ချစ်သင့်သော အာဏာရှင်..ပြည်သူက ချစ်သင့်သောအာဏာရှင်သင်ဘယ်သူ ပြန်ကြည့် ကိုယ့်လူ သတိပေးတယ်..အချစ်များနဲ့ခေါ်လိုက်တယ်။ဘဘရေ..“အာဏာရူးကြီး မှူးကြီး သန်းရွှေ”အကြီးအကဲဆိုသူ က အရှက်မဲ့ ကြမ်းတမ်း.ဒီကဗျာဆရာ..သွားစမ်းဟဲ့ ထောင်ထဲ..ဖော်ညွှန်းပြရာ..အချစ်..သူ ဘယ်သို့ သောသူမပြခဲ့တဲ့ ပြည်သူသို့ရင်ဝယ်သား.သူ၏ မေတ္တာတရား..မဲ့ခဲ့တဲ့ အချစ် ဘယ်မလဲ အကြီးအကဲ၏ အကြင်နာ..သမိုင်းပေါ်က အမိုက်စက်မဲသထက်မဲကဗျာဆရာရဲ့ အချစ်..အာဏာရှင်ကို အသေသတ်နိုင်တယ်.သန်းရွှေ ရာဇ၀တ်သား..လူဘ၀က ထာဝရ..သူသေသွားခဲ့ပြီ။ကဗျာဆရာသာ အာဇာနည်လူသား..အချစ်များနဲ့ သူ. သို့ မဟုတ် ကိုစောဝေသင် ဂုဏ်ယူလော့ ..မျက်နှာမော့မသဒ္ဓါ ( ၂။၁၄။၂၀၁၀)“အာဏာရူးကြီး မှူးကြီး သန်းရွှေ” ကဗျာ ပဟေဠိကဗျာဆရာ စောဝေ က အချစ်ဂျာနယ်တွင် ရေးဖွဲ့ထားသော ကဗျာ။ စာကြောင်း ထိပ်ဆုံး စကားလုံးများ ပေါင်းစပ်လိုက်လျှင် အာနာ(ဏာ)ရူးကြီး မှူးကြီး သန်းရွှေ ဖြစ်လာသည်။ ဤကဗျာကြောင့် ကဗျာဆရာကို အင်္ဂါနေ့ ဇန်နဝါရီ ၂၂ ရက်နေ့က နေအိမ်မှ လာရောက် ဖမ်းဆီးသွားခဲ့သည်။ကဗျာဆရာ စောဝေ အဖမ်းခံရကိုသက် | ဇန်နဝါရီ ၂၃၊ ၂၀၀၈ကဗျာဆရာ စောဝေ၏ ကဗျာဆရာ စောဝေ၏ ကဗျာတပုဒ်ပါ စာကြောင်းများ၏ ထိပ်ဆုံးစာလုံးများကို ဒေါင်လိုက်ဖတ်ပါက “အာနာရူးကြီး မှူးကြီး သန်းရွှေ” ဟူသည့်စာသား ထွက်လာ သောကြောင့် ရဲအထူးသတင်းတပ်ဖွဲ့ (အက်စ်ဘီ) က ၎င်းအား ယမန်နေ့က ဖမ်းဆီးလိုက်ကြောင်း ရန်ကုန် စာပေအသိုင်းအဝန်းက ပြောသည်။အဆိုပါကဗျာကို ယခုအပတ်ထုတ် အချစ်ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားပြီး ယမန်နေ့က ယင်းဂျာနယ်၏ ထုတ်ဝေသူ မောင်ပန်းမွှေး၊ အယ်ဒီတာချုပ် ဦးမြတ်ခိုင်နှင့် ကိုစောဝေတို့ ၃ ဦးကို စာပေစိစစ်ရေးအဖွဲ့က ခေါ်ယူတွေ့ဆုံပြီးနောက် ကိုစောဝေ အား အက်စ်ဘီကဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု အမည်မဖော်လိုသည့် အယ်ဒီတာ တဦးက ပြောသည်။ “အဖြေထွက်မလာတဲ့ လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေမှာ အနုပညာရှင်တွေက ရတဲ့ အပေါက်ကနေပြီးတော့ သူတို့ရဲ့ ဆန့်ကျင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကို ပြတာတွေကို တွေ့နေ ရတယ်။ သူတို့ရဲ့ ဝေဒနာကို ရင်ထဲမှာ မခံစားနိုင်တော့လို့ ဖြစ်လာမယ့်ဆိုးကျိုး တွေကိုတောင်မတွေးတော့ဘဲ တကိုယ်တော်ဆန့်ကျင်ရေးတွေ လုပ်လာကြတယ်” ဟု အမည်မဖော်လိုသည့် အယ်ဒီတာက ပြောသည်။ပဲခူးတိုင်း ဖြူးမြို့ရှိ ဆက်သွယ်ရေးရုံးစာရေး ကိုစောဝေသည် ၁၉၈၈ ခု ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံတွင် ပါဝင်သောကြောင့် အလုပ်ထုတ်ခံခဲ့ရသည်။ ၎င်းနောက်ပိုင်းတွင် ရန်ကုန်သို့ပြောင်းရွှေ့အခြေချခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ကိုစောဝေသည့် လူမှုရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်နေသော အဖြူရောင်သက်တံအဖွဲ့ကို ဦးဆောင်နေသူတဦးလည်း ဖြစ်သည်။ အဖြူရောင်သက်တံအဖွဲ့အား အနုပညာရှင်များဖြင့် စုစည်းထားပြီး အိတ်ခ်ျအိုင်ဗီဝေဒနာရှင် ကလေးငယ်များအတွက် ရန်ပုံငွေရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။အချစ်ဂျာနယ်သည် အနုပညာအသိုင်းအဝန်းနှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်း၊ ဆောင်းပါးနှင့် ကဗျာများကို ဖော်ပြသည့် ဂျာနယ် တစောင်ဖြစ်သည်။ ယခုအပတ်ထုတ် အချစ်ဂျာနယ်တွင်ဖော်ပြထားသည့် ကိုစောဝေ၏ ကဗျာမှာ “ဖေဖော်ဝါရီဆယ့်လေး” ဟု အမည်ပေးထားသည့် အချစ်ကဗျာတပုဒ်ဖြစ်သည်။အချစ်ဂျာနယ် ထုတ်ဝေသူ မောင်ပန်းမွှေးနှင့် အယ်ဒီတာ ဦးမြတ်ခိုင်တို့သည် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် နီးစပ်သူများ ဖြစ်ကြပြီး ကိုစောဝေ ကဗျာကိုဖော်ပြသဖြင့် ၎င်းဂျာနယ်အား စာပေစိစစ်ရေးက ပိတ်ကောင်း ပိတ်နိုင်သည်ဟု ပြည်တွင်း စာနယ်ဇင်းသမားများက သုံးသပ်ပြောဆိုနေကြသည်။ယခုအပတ်အတွင်း စာအုပ်ဆိုင်များတွင် အချစ်ဂျာနယ် ဝယ်မရအောင် ကုန်သွားသည်ဟု ရန်ကုန်မြို့ရှိ ဧရာဝတီ သတင်းထောက်က ပြောသည်။http://www.irrawaddy.org/burmese/news2008/January/jan_23a_08.htmlကဗျာစောဝေကို ပြန်လွှတ်ပေးရန် AAPP ပြောကြား မြင့်မောင်တနင်္လာနေ့၊ ဇန်နဝါရီလ 25 ရက် 2010 ခုနှစ် 18 နာရီ 38 မိနစ်နယူးဒေလီ (မဇ္ဈိမ)။ ။ ကဗျာဆရာ ကိုစောဝေ ယခုလ ၂၁ ရက်နေ့တွင် လွတ်ရက်စေ့ခဲ့သော်လည်း ယနေ့တိုင် ပြန်လွတ်မလာသဖြင့် အမြန်ဆုံး ပြန်လွှတ်ပေးရန် ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေး အသင်း (မြန်မာနိုင်ငံ) AAPP-B က ပြောဆိုသည်။ရန်ကုန်ထုတ် အချစ်ဂျာနယ်တွင် “အာဏာရူးကြီး မှူးကြီး သန်းရွှေ” စာသားပါသည့် သူ၏ “ဖေဖော်ဝါရီ ဆယ့်လေး” ကဗျာ ပါရှိခဲ့သဖြင့် ၂ဝဝ၈ ခု ဇန်နဝါရီ ၂၁ ရက်နေ့တွင် ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရကာ နောက်ပိုင်းတွင် နိုင်ငံတော် အကြည်ညို ပျက်စေမှုဖြင့် အင်းစိန်ထောင်တွင်း အထူးတရားရုံးက ချုပ်ရက်များ တပေါင်းတည်း ကျခံရန် ထောင်ဒဏ် ၂ နှစ် ချမှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သဖြင့် ပြန်လွှတ်ပေးရန် AAPP-B က ယခုလို ပြောဆိုလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။“တကယ်တမ်းကျတော့ ကိုစောဝေက စတင်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့ နေ့ရက်ကစပြီး ချုပ်ရက်တွေကို ခံစားရမှာ။ အခုဟာက စတင်ဖမ်းဆီးစဉ်က စပြီးတော့ ချုပ်ရက်တွေကို မခံစားရဘဲ ရုံးတင်စစ်ဆေးတဲ့ မေလမှ စပြီးချုပ်ရဲ့ သတ်မှတ်လိုက်တဲ့အတွက် ပထမ အဖမ်းခံရတဲ့ ၃ လ ကျော်ကျော်က မတရား ဖမ်းထားသလို ဖြစ်နေတယ်။ ဒါဟာ ဥပဒေကြောင်းအရ ခံစားခွင့် ဆုံးရှုံးနေရတာ ဖြစ်တယ်။ အဲဒီအတွက် ကိုစောဝေကို အမြန် ပြန်လွှတ်သင့်တယ်” ဟု AAPP-B တွဲဘက် အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ကိုဘိုကြည်က ပြောသည်။ယခုအမှုကို လိုက်ပါပေးနေသည့် ဗဟိုတရားရုံးရှေ့နေ ဦးစိုးမင်းက “အင်းစိန်ထောင် အထူးတရားရုံးက ချုပ်ရက်များဖြင့် တပေါင်းတည်း ကျခံစေဆိုပြီး တရားသူကြီးက အမိန့်ချခဲ့တယ်။ ချုပ်ရက်ကတော့ ဇန်နဝါရီလ ၂၁ ရက်နေ့မှာ စပြီးတော့ ဖမ်းဆီးတာ ဖြစ်တယ်” ဟု ပြောသည်။ယခုလ ၂၁ ရက်နေ့တွင် လွတ်လာမည်အထင်ဖြင့် လက်ရှိချုပ်နှောင်ထားရာ မန္တလေးတိုင်း ရမည်းသင်း ထောင်သို့ ကိုစောဝေ၏ ဇနီးသည် ဒေါ်နန်းစန်းစန်းအေး သွားရောက်ခဲ့ရာ ထောင်အာဏာပိုင်များက လွတ်ရက် မစေ့သေးကြောင်း ပြောဆိုသဖြင့် ရန်ကုန်သို့ တဦးတည်း ပြန်လာခဲ့ရသည်။ရန်ကုန်ရှိ ရှေ့နေ ဦးအောင်သိန်းက “ချုပ်ရက်ကို ဖမ်းဆီးတဲ့နေ့က စတာမဟုတ်ဘူး။ တရားရုံးကို စွဲတင်တဲ့ နေ့ကနေ စပြီးတော့ သတ်မှတ်တာ ဖြစ်တယ်။ ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ ရက်နဲ့ တရားရုံးတင်တဲ့ ရက်တွေကြား ချုပ်ရက်တွေ မမှန်မကန် ဖြစ်နေတယ်။ ဖမ်းဆီးတဲ့ ရက်ကို ယမန်ယူတဲ့ ကာလလို့ သတ်မှတ်ထားတယ်။ အမှန်က ဖမ်းဆီးရက်ကနေ စပြီးတော့ ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ ကျင့်ထုံးလမ်းညွှန်မှုတွေ ရှိတယ်” ဟု ပြောသည်။ဦးအောင်သိန်းသည် နိုင်ငံရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားမှုများကို လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပြီး ယခုအခါ ရှေ့နေလိုင်စင် ရုပ်သိမ်းခံထားရသူ ဖြစ်သည်။ဒေါ်နန်းစန်းစန်းက ရမည်းသင်းထောင်သို့ ထောင်ဝင်စာ တွေ့ဆုံခဲ့စဉ် ကိုစောဝေသည် သွေးဝမ်းသွားသည့် ဝေဒနာနှင့် မျက်စိဝေဒနာကို ခံစားနေရကြောင်း သိရသည်။http://burmese.mizzimamedia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4578:--aapp-&catid=1&Itemid=2
"ဖား " ဖြစ်သွားတဲ့ "ကျား"
သားသားတို့ အဖိုး (ခန့်ခန့်ညားညား ဟိန်းနိုင်ခဲ့တယ်)
သားသားအဖေ ( အစာငတ်သေတော့မယ်)
ငါတို့ အမျိုးတွေရဲ့ ရုပ်ကလာပ်တွေပေါ့ သားရေ..
သားကို အဖေအစာဝအောင် ရှာမကြွေးနိုင်တော့ဘူး။
အဖေတို့အမျိုး..
မင်း ပေါ့သေးသေးမထင်နဲ့ ..ခေတယ် မထင်နဲ့ 
ဟိုးရှေးရှေး..ဘိုးဘွားတွေ လက်ထက်..တယ်ဘုန်းကြီးတဲ့ တောကောင်ပေါ့အစင်းကျားကိုယ်ထည် ထက်မြိအစွယ်..လေလိုမြန်တဲ့ အလျှဉ်.အမဲလိုက်လျှင်သန်မာခြေ ကိုယ်လုံး..တတောလုံးရဲ့ ဘုရင်..တောကောင်တို့ ရဲ့အရှင်..ကျားနဲ့ ဆင် လယ်ပြင်မှာတွေ့ ကျားကြီး ခြေရာကြီး.. ကျားရဲရာ ကြမ္မာမယိုးသာကျားရှေ့ မှောက်ရက်လဲ..ကျားသနားမှ နွားချမ်းသာရာရကျားလည်းကြောက်ရ၊ ကျားချေးလည်း ကြောက်ရကျားသေကို အသက်သွင်းလို့ စင်းစင်း သေရကံကောင်းတဲ့ ကျား သွားရင်း သမင်တွေ့ကျားသေမှ လူစွမ်းကောင်းပေါ်ကျားလိုက်မှ တုတ်ခုတ်ကျားချင်းကိုက်ရာ သမင်လမ်းကူးမှား ဒီစကားပုံတွေ..အဖေတို့ ကြောင့်ရေးကြတာပေါ့အရင်ကတော့ ကျားဆိုတာ.ဘယ်လောက် အရေးပါထားသလည်းအရင်က ဆို..မင်းဘကြီးတွေနေတာ အလောင်းတော်ကဿပဘေးမဲ့တောမင်းကြီးတော်တွေ နေတာ..ရန်ကုန်တိရိစ္ထာန် ဥယျာဉ်မင်းအဒေါ်တွေက ဆပ်ကပ်ထဲ show girl တွေ ကော့မော့ငါသာ မသေချင်လို့ တောမပြောင်း..ဒီမြစ်ဆုံဇောင်းမှာ မင်းအမေနဲ့ အကြောင်းပါ။မင်းကို မွေးခဲ့တာကံဆိုးတယ် သားရယ်...ခုတော့ အဖေ့ လက်ထက်အုပ်ချူပ်သူတွေ ဒေါ်လာမက်တာကျွန်းတွေ ခိုးခုတ်..ရွှေတွေ ခိုးထုတ်ထင်းတောတွေခုတ် မီးသွေးဖုတ်တဲ့ စစ်သားတဖြေးဖြေးတောပါးတဲ့အခါမျိုးပြုတ်သွားတဲ့ သမင် ဒရယ်ချေမြက်မစားတတ်တဲ့ကျားသတ္တ၀ါဘာတွေ..စားရတော့မှာလည်း။အဖေနဲ့သားရဲ့ အစာအိမ်ကျုံလှီပိန်ကပ် စက္ကူချပ်လိုပြားနေပြီ။ကျားစာ တောထဲမှာ ဘာမှမကျန်တော့ဘူး။စစ်တပ်က ရွာမီးရှို့ ..တိုင်းရင်းသားတွေ ရွာလုံးဖြုတ်ရွာနီးချုပ်စပ် အမဲရှာရန်..နွားတောင်မကျန်ကျားစာ ရွာထဲမှာ ဘာမှမကျန်တော့ဘူး။ခုလည်း..ဒီတတောင်တကြောမြစ်ဆုံပိတ် ဆည်ဆောက်တော့မယ်တစ်တောလုံး တစ်တောင်လုံး ပိုင်ဖူးခဲ့တဲ့ကျားနအဖ လက်ထက်မှာ အဖေ တို့ဟာသူတို့ လက်ခုတ်ထဲက..ဖား။ကမ္ဘာပေါ် တဖြေးဖြေး ကျားက ရှားလာပြီ။အဖေ့အမျိုးတွေ မျိုးတုန်းကုန်ကြပြီ။မှောင်ခို ဈေးကွက် ..အရိုးအရေ..အသွေးအသား လက်သည်းအစွယ်..ခေါင်းခွံ မချန်အောင်ရောင်းကြတယ်။ဘုရားရေ ကယ်ပါ မြန်မာပြည်မှာ..ကျားအရောင်ရေ ၁၅၀ သာကျန်တော့တယ် တဲ့..သားရေ မင်းဖို့ အိမ်ထောင်ဘက်ကျားမတောင် ရှာရတော့မယ် မထင်ဖူး..အဖိုးလို.မြေးတစ်ရာ..မြစ်တစ်ရာအဖေ မြင်ရတော့မယ် မထင်ပါဘူး.မြန်မာပြည်မှာကျားဖြစ်ရ…ဒို့ ဘ၀တောက် တယ်ကံဆိုးလွန်းပါတယ်။နောင်ဆို..ကျားဆို..အရုပ်သာ ဆွဲပြကြပါတော့..အစာရေရှား..ရရာသတ်စားတဲ့ပြည်သူ..ကျားကြောက်လို့ ရှင်ကြီးကိုးတာရှင်ကြီး ကျားထက်ဆိုးတယ်..သေချင်တဲ့ ကျား မပြောင်းချင်လည်း တောပြောင်း..ခုတော့ ကျားရဲလည်းသေ တောလည်းကြေပြီ။ရွှေယုန်လေးရေ..သက်ကယ်ရိတ်သွားရန်ရွှေကျားမရှိတော့တဲ့ ပုံပြင်..ကလေးတွေ ဘာထင်ကြမလည်း.ယနေ့ မင်းအဖေ..မနက်ဖြန်မှာ..ငါ့ အလောင်းကို ဒေါ်လာဈေးခေါ်မှောင်ခို ဈေးခုံပေါ်ရောက်နေမလား..အဖေ့ အရိုး၊ အရေတွေ မှောင်ခိုဈေး..ဒေါ်လာပေးမှရတော့မယ်။မနက်ဖြန်တွေ ဘာမှမရေရာတော့သားရေ..မင်းကြည့်သာနေတော့..အဖေတော့ စိတ်လျှော့လိုက်ပြီ။
အခု ဒို့ က ဖား သားအဖ။
မသဒ္ဓါ (၂။၁၂။၂၀၁၀)ငယ်ပုံပြင်ထဲက ကျားတွေ အစဉ်သတိရတယ်။ ငယ်ငယ်က အဖေ့ပေါင်ပေါ် အိပ်.သူပြောတဲ့ ရွှေယုန်နဲ့ ရွှေကျား သက်ကယ်ရိတ်သွားတဲ့ ပုံပြင်နားထောင်ရင်း ရယ်သံချိုချိုနဲ့ကျမ အင်မတန်ပျော်ရွှင်ခဲ့ဘူးပါ တယ်။ တနင်္ဂနွေ ပျော်ပွဲစား ရန်ကုန်တိရိစ္ဆာန်ရုံက ကျားရုံနားမှ ဆော့ခဲ့ဖူးပါ တယ်။ကျမတို့မြေးမြစ်တွေ လက်ထက်..သူတို့ ကို ရွှေကျားဆိုတာ ဘယ်အရာ… ပြစရာ ကျားလေး တစ်ကောင်မှ တောင် မြန်မာပြည်မှာမရှိမှာတော့ စိုးရိမ်စိတ် တကယ်ဖြစ်မိပါတယ်။ အစိုးရမင်းဆိုသူများရယ်..လူကိုသတ်မှ နိုင်ငံကိုချစ်တာ မဟုတ်ပါ။ ကျမတို့ နိုင်ငံရဲ့ တောတောင် ရေမြေသဘာဝ..ထိမ်းသိမ်းပေးဖို့သတိမေ့ နေကြတာကို သတိပြုပေးကြပါ။ လောကမှာ ငါ့ဗိုက်ပြေ့ရုံ တခုထည်းကြည့်ပြီး အများရဲ့ အနာဂတ်ကို ရောင်းစားရင်..ဒီ သဘာဝလောက ပျက်စီးတဲ့ အခါ လူကြီးမင်းတို့ ရဲ့ မျိုးဆက်တွေ ပါ အတူတူ ခံစားရမှာ သတိပြုစေချင်ပါတယ်။ ငွေတွေ စိန်တွေ ရှိတာလေးနဲ့ ..ဘာမှလုပ်မရတဲ့အရာတွေ အများကြီးမို့ချစ်စရာလူသားတွေ ရဲ့အနာဂတ်ကိုတော့ မဖျက်ဆီးပါနဲ့ …ကျားအရေအတွက်ဟာ မြန်မာပြည်မှာ တဖြေးဖြေးနည်းလာပါပြီ။ အထူးဂရုပြု၍ မျိုးမပြုန်းတီးအောင် ကာကွယ်ပေးကြပါ။မြန်မာ့တောကြောင်များ အန္တရာယ်ရှိနေ မဇ္ဈိမသတင်းဌာန ကြာသပတေးနေ့၊ အောက်တိုဘာလ ၁၆ ရက် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ၁၈ နာရီ ၂၁ မိနစ်ချင်းမိုင်။ ။ ပြည်တွင်းဥပဒေများ မပြည့်စုံ မလုံလောက်မှုနှင့် ဥပဒေအရ တိကျစွာ အရေးယူမှုများ မရှိသည့်အတွက် မြန်မာ့တောကြောင် များ ၏ အရေနှင့် အခြားခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းများသည် မကြာခဏပင် မြန်မာ့ဈေးကွက် အတွင်းသို့ ရောက်ရှိသွားကြသည်ဟု တောရိုင်း တိရိစ္ဆာန်များ ကုန်သွယ်မှုစောင့်ကြည့် လေ့လာရေး အဖွဲ့ကြီးတခု၏ အသေးစိတ် လေ့လာချက် တရပ်က ဆိုထားပါသည်။ယမန်နေ့က ထုတ်ပြန်လိုက်သော အရှေ့တောင်အာရှ ထရက်ဖစ် (TRAFFIC Southeast Asia Report) အမည်ရှိ အစီရင်ခံစာတွင် အနည်း ဆုံး တောကြောင်ကောင်ရေ ၁၁၅၈ မှာ ၁၉၉၁ ခုနှစ်မှ ၂ဝဝ၆ ခုနှစ်အတွင်း မြန်မာ့ ဈေးကွက်များအတွင်း အရောင်းအဝယ် ဖြစ်ခဲ့သည်ဟု ဖေါ်ပြထားပါသည်။အမျိုးသား တောရိုးတိရိစ္ဆာန် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး ဥပဒေအရ အကာအကွယ် ပေးထားသော ထင်ရှားသည့် တိရိစ္ဆာန်မျိုးစိတ် ၅ မျိုးမှာ ကျား၊ ကျားသစ်၊ ကျားသစ်လည်ပြောက် (clouded leopard) ၊ ကြောင်ဖြူ (marbled cat) ၊ နှင့် အာရှရွှေရောင်ကြောင် (Asiatic golden cat) တို့ ဖြစ်ကြသည်ဟု TRAFFIC အစီရင်ခံစာက ဆိုထားပါသည်။ကမ္ဘာ့ တောတိရိစ္ဆာန် ဝယ်လိုအားနှင့် ရောင်းလိုအားကို ဖြည့်ဆည်းသည့် အနေနှင့်၎င်း၊ နိုင်ငံတကာမှ ဝယ်လက်များဖြစ်သော ထိုင်း၊ တရုတ်၊ ထိုင်ဝမ် စသည့် အဓိကနိုင်ငံများမှ ဖောက်သည်များ အဆင်ပြေ လွယ်ကူစေရန် အတွက်၎င်း၊ တောကြောင် အစိတ်အပိုင်းများ ကုန်သွယ်ရောင်းဝယ်မှု ဈေးကွက်သည် အများအားဖြင့် နိုင်ငံတကာ နယ်စပ်များတွင် ရှိကြသည်။စိတ်ပျက်စရာ ကောင်းလှသည်မှာ မျိုးတုံးပျောက်ကွယ်မည့် အန္တရာယ်မရှိသည့် တိရိစ္ဆာန်များထက် ကမ္ဘာအနှံ့ မျိုးတုံး ပျောက်ကွယ်မည့် အန္တရာယ် ရှိနေသည့် တိရိစ္ဆာန်များကို ဈေးကွက်ထဲတွင် ပို၍ တွေ့နေရသည်ဟု TRAFFIC က ထုတ်ဖေါ် ပြောဆိုထားပါသည်။မျိုးတုံး ပျောက်ကွယ်တော့မည့် မျိုးစိတ်များ ကုန်သွယ်ရောင်းဝယ်မှုဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ ကွန်ဗင်းရှင်းတရပ်ကို လက်မှတ် ရေးထိုးထား သည့် မြန်မာနိုင်ငံမှ အာဏာပိုင်များသည် ဤ တိရိစ္ဆာန်များနှင့် တိရိစ္ဆာန် အစိတ်အပိုင်းများ တရားမ ဝင်ရောင်းဝယ်မှုကို ကာကွယ်ရန် ဥပဒေအရ တာဝန်ရှိပါသည်။သို့သော် ဤပိတ်ပင် တားဆီးထားသော ကုန်ပစ္စည်းများကို အများပြည်သူမြင်ကွင်းတွင် ဆိုင်ရှင်များက ရဲရဲတင်းတင်း လွတ်လွတ် လပ်လပ် ရောင်းဝယ်နေကြသည်ကို ကြည့်လျှင် "ဤတရားမဝင် ကုန်သွယ် ရောင်းဝယ်မှုကို တားဆီးရန် တလေးတစား အရေးယူ ဆောင်ရွက်မှု မရှိကြောင်း ထင်ရှားပြီး၊ ယခုပင် မျိုးတုံးပျောက်ကွယ်မည့် အန္တရာယ် ရှိနေပြီဖြစ်သည့် မျိုးစိတ်များကို ဤရောင်းဝယ်မှုများ က ခြိမ်းခြောက်နေကြောင်း မီးမောင်း ထိုးပြနေသည်" ဟု မလေးရှားအခြေစိုက် အဖွဲ့ကြီးက စိတ်ပျက်လက်ပျက် ပြောထားပါသည်။လေ့လာမှု ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ကာလအတွင်း ဈေးကွက်အတွင်း အနည်းဆုံး ကျား ၁ဝ၇ ကောင်ကို ဈေးကွက်အတွင်း တွေ့ရှိခဲ့ပြီး TRAFFIC ၏ ၂ဝဝ၃ ခုနှစ် အစီရင်ခံစာအရ မျိုးတုံး ပျောက်ကွယ်မည့် အန္တရာယ်ရှိနေသည့် တိရိစ္ဆာန်မျိုးစိတ်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည့် ကျား ကောင်ရေမှာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အကောင်ရေ ၁၅ဝ ထက် မပိုနိုင်တော့ဟု ဖေါ်ပြထားပါသည်။ဤလျော့နည်း ကျဆင်းလာနေသော ကျားကောင်ရေကို ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရန် ချက်ချင်း အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများ မပြုလုပ်လျှင် မြန်မာ့တောများထဲတွင် ကျားများ အစာရှာဖွေ စားသောက် သွားလာနေသည်ကို တွေ့ရတော့မည် မဟုတ်ဟု အစီရင်ခံစာ ပြုစုသူများက သတိပေး ပြောဆိုထားပါသည်။ဈေးကွက်အတွင်း အများဆုံး တွေ့ရှိရသည့် တောကြောင် အစိတ်အပိုင်းများမှာ အရေ၊ အစွယ် နှင့် ခေါင်းခွံများဖြစ်ပြီး၊ ဝယ်ယူသူများက ဆုလာဘ်အနေနှင့်၎င်း၊ ကံကောင်းစေသည့် အဆောင်အဖြစ်၎င်း အိမ်တွင် ချိတ်ဆွဲပြသထားလေ့ ရှိသည်ဟု ဆိုသည်။တရုတ်ပြည်မှ ဝယ်လက်များ အလွယ်တကူ သွားလာနိုင်သည့် ထိုင်းနိုင်ငံ၏ မြောက်ဖျားတဘက်ကမ်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ ရှမ်းပြည်နယ်မှ တာချီလိတ်သည် မြန်မာ့တောကြောင် ကုန်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းကြီးအတွက် တရားမဝင် မြို့တော်ကြီး ဖြစ်နေသည်ဟု ဆိုသည်။ဤတာချီလိတ်မြို့အပြင် အခြားဈေးကွက်များမှာ ထိုင်းနိုင်ငံနယ်စပ် ဘုရားသုံးဆူ၊ တရုတ်နယ်စပ် မိုင်းလား၊ မြန်မာနိုင်ငံ မွန်ပြည်နယ် ကျိုက်ထိုရှိ ကျိုက်ထီးရိုးဘုရား ဈေးကွက်များ ဖြစ်ကြသည်ဟုလည်း အစီရင်ခံစာတွင် ဖေါ်ပြထားပါသည်။မဇ္ဈိမသတင်းဌာန မှ အပြည့်အစုံသို့ 
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း က နိုင်တယ်…
မင်းကိုနိုင် အဖေနဲ့ ကျ သူရှုံးတယ်…
လူတွေကို အရှက်မဲ့ ကြွားနိုင်ခဲ့တယ်။
ဦးအုန်းသန်း ရဲ့ သမီးနဲ့ ကျ စိန်မမ ရှုံးတယ်။
အဖေ အာဇာနည်ကောင်း မရ..အော့ကျောလန် လူဆိုးကြီး၏ သမီး။
ရာဇပလ္လင်ပေါ် ဖင်ဝဲပေါက်မတတ် မတန်မရာထိုင်မဆန့် မပြဲစား မင်းတြားဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ ကျ ဘဘ ရှုံးတယ်။ပြည်သူ့ မေတ္တာ မရ.လက်နက်ပြဆိုးသွမ်း လူ့ မိစ္ဆာ။နည်းပညာဝန်ကြီး…နျူကလီယားဝန်ကြီးလူသတ်ပညာတတ်တာ နိုင်ချင်နိုင်မယ်.ဖြူဖြူသင်း နဲ့ ကျ မောင်သောင်းရှုံးတယ်။စေတနာမရှိ..အကြင်နာမသိ သုညနတ္တိ..အတ္တဘော။ခေတ်မီလက်နက်.အစွမ်းထက်တာနိုင်ချင်နိုင်မယ်။ယနေ့ ခေတ်မြန်မာတပ်မတော်သား က ဖက်ဆစ်ပျောက်ကျားတပ် ကို ရှုံးတယ်။ရွှေငွေအတွက် လူသတ်..လက်တဆုတ်ရဲ့ ကြေးစားတပ်။အမှားတွေ လိမ်တာတော်ချင်တော်မယ်..မြန်မာ့အသံ မြန်မာ့သတင်းစာ..Blogger တွေနဲ့ ကျ ရှုံးတယ်။အစိုးရဖော်လံဖား..ကျောက်ဖားသတင်းစာဆရာများမှန်ဘီဒိုထဲပြရန် မြန်မာ အကယ်ဒမီဆုတွေ တန်းစီရချင်ရမယ်။တော်ပါပေ့ဆိုတဲ့ ပေါ်လီစီ ဖားဒါရိုက်တာ.Burma VJ နဲ့ ကျ ရှုံးတယ်။ဖြစ်ရပ်မှန်သတင်း..ဟန်ဆောင်ခြင်းနဲ့မဖုံးသာ။ကြီးပေ့ အိမ်ယာ..ကောင်းပေ့ အစားအစာ..လှပသောကား..စည်းစိမ်ပကာသနများ..ခရိုနီ ဆိုတဲ့ လူပြိတ္တာ..ကျော်သူ နဲ့ကျ ရှုံးသွားတယ်။မရှိတဲ့ စေတနာ..ငွေနဲ့မဖုံးသာ…အနိုင်တွေနဲ့စစ်တိုက်နေတဲ့ အရှုံး..လက်နက်နဲ့မနိုင်..ငွေကြေးနဲ့မနိူင်..နျူကလီယာ လက်နက်ဆန်းတောင်မနိူင်ဘူးဓမ္မ နဲ့အဓမ္မ..အတ္တ နဲ့ ပရ..တဏှာလောဘ နဲ့ စွန့် လွှတ်အနစ်နာချိန်ခွင် ဇောက်ထိုး ..အမှန်တရားဘက်သာ အနိူင်ဆုံး..အာဏာရှင်ဆိုတာ..သမိုင်းထဲမှာ လူအမည်ပျောက်ဆုံး..နိုင်သော်လည်း..သူ ထာဝရ ရှုံးတယ်။ မသဒ္ဓါ ( ၂။ ၁၁။၂၀၁၀) အပြည့်အစုံသို့ 
မင်္ဂလာမွေးနေ့ ပါ ကိုကျော်သူ..
သူငယ်ချင်းရေ...အသက်နံပါတ်ကြီးတိုင်း..ရင့်ကျက်တာမဟုတ်ဘူး.ရ၀ကျော် သေခါနီးပေမဲ့ မိုက်နေတဲ့ လူတွေရှိတယ်။သူငယ်ချင်းရေ...ပညာတွေတတ်တိုင်း…လူပီသတာ မဟုတ်ဘူး..အာဏာရှင်အကြိုက် ခွေးလိုအူနေသူတွေ ရှိတယ်..သူငယ်ချင်းရေ...စိန်တွေ ၀တ်နိုင်တိုင်း..လူချီးမွမ်းတာမဟုတ်ဘူး..လူပေါင်းသန်းချီ..အဖေကိုဆဲခံတာ နားထောင်ရဲတဲ့သမီးတွေရှိတယ်…သူငယ်ချင်းရေ...ရုပ်ရှင်အကယ်ဒမီ..ရတိုင်း ပြည်သူချစ်သောအနူပညာသည်မမည်ဘူးသရုပ်မပီ..ပေမမှီ…အဖားကောင်း ရသူတွေလည်းရှိတယ်။လူရဲ့ဘ၀..တိုတောင်းကာလမှာ..၀င်လာချိန်..နတ္တိ..ထွက်သွားချိန် နတ္တိ..ကျန်ခဲ့သမိုင်းသာ..မှတ်ကျောက်ဖြစ်၏။အတ္တ မောဟ ဒေါသမရှိသော..သင်၏ သမိုင်းသည် ဖြူစင်အတိ..၀မ်းမြောက် သာဓုခေါ်ပါ၏။သင်သည်..တုနှိုင်းမဲ့ မေတ္တာရှင်.အနူပညာသည်…သင် သရုပ်ဆောင်မှမဟုတ်…အနုပညာသည် သင် ဒါရိုက်တာလုပ်မှမဟုတ်အနုပညာသည် သင် ကဗျာရေးမှမဟုတ်အနုပညာသည် သင် ပန်းချီဆွဲ မှမဟုတ်သုဿာန်မြေကို တူးသောလက်အလောင်းစင်ကို ပြင်သောလက်…ပူဆွေးသူကို ယုယစွာ ပွေ့ ဖက်နာကြင်သူ သို့ ဆေးအလှူလက်အသုဘကို ရှုသောမျက်လုံး.စာနာတတ်သော နှလုံးကြင်နာပါ သော အပြုံး..ဤအရာသည်…အနုပညာမြောက်ပါ၏။သင်သည် ပြည်သူချစ်သော အနူပညာရှင်…ပြောချင်သူ ပြောပစေ..ကျော်သူ စဏ္ဍာလ..ကဲ့ရဲ့ချင်သူ ကဲ့ရဲ့ပစေ..ကျော်သူ လူမိုက်.မခေါ်မပြောနေပစေ ..မှန်ရာကို ဦးစိုက်..နှလုံးသားစေရာသာလိုက် သူငယ်ချင်း..လူကောင်းသတင်း..လူလူချင်းဘဲ သိတယ်။လူမိုက်ကဲ့ရဲ့..မှုစရာ မဟုတ်ဘူး။အသက် (၅၁)..သင်ဘ၀ လူဖြစ်ကျိူးနပ်ခဲ့ပြီ…သာဓု သာဓု သာဓု ကိုကျော်သူ..သင်ပြုသော ကုသိုလ်ရေ တစ်စက်…အာဏာရှင်ပေါ် ဖြန့် ကျက်တယ်..အကျဉ်းချချင်ချ..အသက်သတ်သော် မရ.ရှင်းသန့် သော သင်၏ မည်နာမ…စံတုနှိုင်းမရ. ရှင်သန့် အသက်ဝင်..သင်သည် ပြည်သူ့ ချစ်သော စေတနာရှင်…သင်သေသော်ညား..သင်၏ သင်္ချိုင်း..ပန်းပွင့်များဝေလေမည်။သင်၏ ကုသိုလ်…နတ်လူသာဓုခေါ်တော့သည်။သင်၏ သားသမီး စိန်မစီလည်း တင့်တယ်သည်။သင်၏ ဇနီး..သင့်အတွက် ပီတိလွှမ်းတော့သည်။ဖြစ်လေရာ ဘုံဘ၀..ကံသာလျှင် သင့်၏နောက်လိုက်ဖြစ်တော့သည်။သင်သည် မသေ..သင်၏ စေတနာသည် မသေ…သင်၏ မေတ္တာသည် မသေ..သင်၏ အနုပညာသည် မသေ…နှလုံးခုန်ခဲ့သော အသက် ၅၁…သင်သည်..လူစင်စစ်ဖြစ်ခဲ့သည်..ကောင်းသော မွေးနေ့ ပါ သူငယ်ချင်းယုံကြည်ရာလမ်းသာ ဆက်သာနင်း..သုတိ မင်္ဂလာအဖြာဖြာ..ပြည်စုံဝေဖြာမင်းရဲ့ မွေးနေ့ မှာမသဒ္ဓါ (၂။၁၁။၂၀၁၀)စေတနာရှင်..အနုပညာရှင် ကိုကျော်သူ၏ ၅၁ နှစ်မြောက်မွေးနေ့ သို့ ..ဂုဏ်ယူပါတယ် သူငယ်ချင်း..မင်း၏ တုနှိုင်းမရ ဂရုဏာ..စေတနာ နှင့် မေတ္တာ
အုပ်စိုးသူ နဲ့ ပြည်သူ..
လွှတ်တော်နဲ့ဟစ်တိုင်ရှိခဲ့တယ်..
အာဏာရှင်ထက်သာခဲ့ တဲ့ သက်ဦးဆံပိုင်စံနစ်..
လူလက်တစ်ဆုတ်ကောင်းစားရန်..မြေလှန်ရောင်းတဲ့သယံဇာတ..ဓါတ်ငွေ့ ကြောပေါ်ထိုင် လျှပ်စစ်မရ။။စပါးတောင်ပုံ..ထမင်းရည်သောက်ကြ..ရှိသမျှ တရုတ်ဘက်စီးဆင်း..ချဉ်သီးပင် အောက်ချဉ်သီးငတ်နေခြင်း..ပြည်သူပိုင်တဲ့မြေ..ပြည်သူပိုင်တဲ့ ရေ..ပြည်သူ ဆိုင်တဲ့ ဘဏ္ဍာ..ဘယ်မှာလည်း..ပြည်သူမပိုင်တဲ့ မြန်မာ..လက်ဝါးကြီးအုပ် ဂုတ်သွေးစုတ်ပြည်သူကို စည်းဝိုင်းအပြင် ရုံခါထုတ်တဲ့နောက်ရောက်ရာနိူင်ငံမှာ မျက်နှာငယ်အနာဂတ်သုန်းဒုက္ခသည်တဲတန်း မျက်စိတဆုံး..လူရောင်းကုန်ဖြစ်..ဘ၀တုန်း..မြန်မာပြည်သူရဲ့ ဘ၀..ဒို့ တွေ အားလုံး သုံည..တိုက်မလား..သေမလား…အားလုံးစဉ်းစားကြ။မပြောင်းချင်ရင်…မျိုးဆယ်ဆက် ကျွန်ခံ..အညံ့မခံလို အသေခံ တွန်းလှန်..ဘိုးဘွားအမွေ ဒို့ မြေကိုပြည်သူ အားလုံးပိုင်ကြရန်..အားအင်ယူ တဖန်ပြန်ထ.
မြန်မာပြည်ကို နေ့ သစ်ပြန်စရအောင်..မသဒ္ဓါ ( ၂။၉။၂၀၁၀)
အနှစ်ပေါင်းရှည်ကြာထီထွင်လာတဲ့လူ့ ဦးနှောက်..မိုးထိလောက်မြင့် အဆောက်အဦ..လေလှိုင်းတို့ နဲ့အသံကိုသယ်ယူရုပ်မြင်သံကြား..အာကာသထိသွား..စွမ်းပေ့ လူသားလှိုင်းရှည်လှိုင်းတို သံလိုက်လှိုင်း..အအေးအပူ..လိုရာဖြစ်စေတယ်…ရေထဲ အပင်စိုက်..လေထဲ အပင်စိုက်သမုဒ္ဒရာပေါ်ဆောက်တဲ့တိုက်..အသင့်သုံး အစားအစာ..သံဗူးဖောက် အလိုလိုနွှေးတဲ့အစာနေရောင်ခြည်သုံး ယာဉ်ကီးဘုတ်မလိုတဲ့ ကွန်ပြူတာတီထွင်စက်ရုပ်သုံး..စက်မှုလုပ်ငန်း..အင်တာနက်နဲ့ ဈေးဝယ်ထွက်..ကမ္ဘာကို ပတ်ရန် မလိုတော့တဲ့ရက် (၈၀)..ခုခေတ်မှာ…လိုတာဖြစ်နိူင်တယ်…ဒီခေတ်မှာမွေး..ကျမ..နှစ်ဆဲ့တစ်ရာစုလူသား..ကမ္ဘာတခြမ်းမှာမီးထိန်သော်ငြား..ဆီမီးတိုင်ထွန်းဆဲ မြန်မာနိုင်ငံသား..တိုးတက်နိူင်ငံခြား..သုံးနှစ်သား ကွန်ပြူတာကိုသုံးချိန်..မြန်မာလူငယ်ဘွဲ့ ရ..ကကြီးရေ ကတောင် မသိရ တဲ့ IT.သိလိုရာ ပညာရှာ..google မှာ..မြန်မာလူမျိုး gtalk chat တခုဘဲသိသေးတဲ့အခါ..သိပ္ပံမောင်ဝ ရင်သပ်ခဲ့ရတဲ့ ဆရာစောကျောင်းမျိုးနဲ့မြန်မာပြည်ကိုယ်ထူကိုယ်ထ..ကျောက်သင်ပုန်းကျောက်တန်သုံးနေရဆဲ မြန်မာပြည်။မြန်မာ..ဘွဲ့ ရ နိုင်ငံခြားပညာ မူလတန်းတောင်မမီသေးတဲ့အခါ…ဆရာမဟောင်း…၀ဲတဲ့ မျက်ရည်စီးကြောင်း..ပညာရှင်တို့ ရယ်..ဒီတိုင်းဘဲရပ်ကြည့်ကြတော့မလား..လက်နက်အင်အားအောက်.ပညာရွှေအိုးလဲကျမှောက်ခဲ့ပြီ။ဒီလိုနဲ့အပြောကျယ် စက်မှုနိူင်ငံတည်မတဲ့..ကြက်ဆူဆီ သုံးလေးစေ့ကြိတ်..ပုဂံလေကြောင်း တက်မောင်းပြမဟဲ့..တကယ်ကျ…ကိုယ်လုံးတီးမှန်ဝတ်ရုံနဲ့ဘုရင်ကြီး..ဘေးက ဖော်လံဖား မင်းကြီး..နီးရာဓါးကြောက်..ဘိုမင်းတသိုက်..အရူးဘုံမြှောက်လိုက်တာ…ပါကုန်ပေါ့..ရှိသမျှ တွင်းထွက်သယံဇာတ..တပြည်လုံး made in China ဘဲစိုးမိုးတယ်။ဧရာဝတီရေခမ်းခြောက်..မြစ်ဆုံဆည်ဆောက်တယ်..ရသမျှ လျှပ်စစ်..တရုတ်ကိုဆက်သမယ်။မြေဆီခမ်းခြောက်..ဧရာဝတီ အလှပျက်တယ်..ဘယ်မလဲ နောက်ဆုတ်..မြန်မာလူနေဘ၀..ကျောက်ခေတ်က ပြန်စတယ်..ကညင်ဆီတိုင်..ဖယောင်းတိုင်ဘဲ မီးဇာလင်းရတယ်.ပြောလိုက်မယ် မင်းကြီး..အမှန်ကိုဘွင်းဘွင်း..ပညာမတတ် ရူးသူအုပ်ချုပ် .တိုင်းပြည်ပြုတ်နေခြင်း..၀မရှိ ဘဲ ၀ိမလုပ်နဲ့ ..ဘုန်းကံရှိမြင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ မှန်ဝတ်ရုံလွှာ..မင်းကိုယ်ပေါ်ဘာမှမရှိ ဟောင်းလောင်း..အရှက်မရှိ မုန့် စိမ်းပေါင်း..မသဒ္ဓါ (၂။ ၆။၂၀၁၀)
မောင်လူအေး၏ တုတ်ကွေးနဲ့မသဒ္ဓါ၏ တုတ်ကွေး..
ဘာတုတ်ကွေးလည်း တော့ မသိ..
နယ်ပိုင် မောင်လူအေးရဲ့ တုတ်ကွေး..
ဂေါက်သီးလေးနဲ့ဇိမ်ကျပေမဲ့
ချောင်းတဟွတ်ဟွတ် ရင်တွေ နာလျှက်.
စောင် ခေါင်းမြီးခြုံ ချွေးထုတ်တယ်။
“ ဟဲ့ နင်တို့အင်္ဂလိပ်ဆေးက မပျောက်ချင်း ထညက်.ကျို သုံးခွက်တခွက်တင် ဆေးမြီးတိုသောက်”အမေ့ အာဏာကြောက်ခါ မညင်းရဲ..ချင်းပြုတ်ရည် ပူပူ ချိူချိုရဲရဲ..တုတ်ကွေး မပျောက်..လူတော့ ကျော်သူဆီ အလောင်းအပ်ရမယ် သေချာတယ်…ရ၀ကျော် အမေ ကျမထက် သူ သန်မာသေးတယ်။သမီးရေ ပျော်အောင် အိပ် အိပ်..အမေသိပ်တဲ့အခါ..မှေးကနဲပျော်တဲ့ခဏ..အတိတ်ဘ၀ထဲရောက်သွားတယ်။ဒို့ အရေးအော်နေတဲ့ ည..ဇောက်တိုးချည်ထားတဲ့အလံတစ..တရွေ့ရွေ့ နဲ့လူတန်းထဲကကျမ ရဟန်းရှင်လူ..အုန်းအုန်းကြွက်ကြွက်ကြားလိုက်တာ..သေနတ်သံချက်ပစ်ပြီ..ပစ်ပြီ…ကျည်ကပ်.အတွဲလိုက်…အလဲအပြို လူသားတွေ အထပ်လိုက်..သွေးနံ့ ညှီ..ယမ်းငွေ့ မပီ..မြင်ယောင်သည် ၈.၈.၈၈ ၏ ပန်းချီ..အိပ်လို့ တောင် မပျော်…စားတောင်မရ…တုတ်ကွေးထက်ဆိုးတာ..၈၈ ရဲ့ ဆောင်းအိမ်မက်..ဦးဏှောက်ထဲ အခုထိ ထင်မြင်ဆဲ..ဘယ်တော့များ ဒို့ တွေ ၀ဋ်ကျွတ်ပါ့မလည်း..မျိူးဆက်တွေ တဆက်ပြီးတဆက်..ကျွန်သက်တွေ ဘဲ ရှည်..အာဏာ ရှင်က လက်ခမောင်းခတ်နေဆဲ..ထိုးမဲ့ ဆင်ဟန်ပြင်..နောက်တလှမ်းချင်းဆုတ်..ကွဲပြဲ ပြန့် ကြဲနေတဲ့ ၈၈ ကျောင်းသားတသုတ်ပေါ့ တချို့ကထောင်ထဲ..တချို့က မြေကြီး ထဲ..တချို့ က မျက်နှာမွဲတချို့က လက်မထောင်ဆဲ..တချိူ့ က အာဏာနောက်လိုက်ဆဲတချို့ က ပါတီထောင်မယ် ရွေးကောက်ပွဲတချို့က လေသေနတ်ထောင်ဆဲ..တချိူ့ လည်း ၈၈၈၈ power online ပေါ် ကော်ဆဲ..တော်ကြာပါတော့ မောင်ငယ်များ..နိုင်ငံက ချောက်ထဲမှာ..၈၈၈၈ night mare ဆိုတာ ကြုံဖူးသူ.ဖျားနေတာတောင် မမေ့သာဖူးတုတ်ကွေးဝင်ချိန် ခြိမ်းခြောက်တစ္ဆေသူလေ..ပြန်ပေါ်လာနေဆဲ။..ဒို့ လိုနေတာ ညီညွတ်ကြဖို့ ပါဘဲ…တိုက်ပွဲပြင်..ဘယ်လို တိုက်ကြမလည်း..ဆဲဆိုတာတွေ ရပ်ကြပါတော့..အာဃာတတွေ စွန့် ကြပါတော့.အတ္တ အရေခွံချွတ်ကြပါတော့.ကိုယ့် မျိုးဆက်မှာခံခဲ့ရတာ..အမှတ်ရပါလော့..နောက် မျိုးဆက်အတွက်..ဘာလုပ်နိုင်မယ် ဆုံးဖြတ်ကြပါတော့..ကိုယ်ကြမ္မာ ကိုယ်ပိုင်..ယှဉ်ပြိုင်ရဲမှ..အနိုင်ကိုစွဲတယ်..ကုန်ဆုံးခဲ့သော စတေးခံဘ၀များမြေမြှူတ်သဂြို င်္လ်..တကယ် နိူင်ငံကို ချစ်ရင်…တကိုယ်ရည်ပါဝင်ကြ..ဒို့ တော်လှန်ရေး စကြရအောင်။အခါခါရှုံးတာ..ပြန်သုံးသပ်..အာဏာရှင်ကို ဖြုတ်ရအောင် အမြစ်ပြတ်နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲနဲ့အဆုံးသပ်..အောင်ပွဲနဲ့ သာ ဇာတ်လမ်းဖြတ်ကြရအောင်..မသဒ္ဓါ ( ၂၊ ၅၊ ၂၀၁၀)
မောင်တားဆီး၏ မြန်မာပြည်အတွေ့အကြုံ (ကွန်ဒွန်ကလေး၏…ရ...